देउवाले चाले यस्तो कदम, सारा नेपालि खुसि तर चिनलाई भने तनाव ? – GALAXY
देउवाले चाले यस्तो कदम, सारा नेपालि खुसि तर चिनलाई भने तनाव ?
हुम्लाको लिमी लाप्चासहित नेपाल–चीन सीमामा देखिएको सीमा विवाद अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छानविन समिति बनाएपछि सारा नेपालि खुसि भएका छन् । एक इन्च भूमि नछोड्ने रणनीतिका साथ देउवाले चिनियाँबाट अतिक्रमण भएको लाप्चासहित क्षेत्रमा अध्ययन टोली खटाएका हुन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदा जिल्लामा पनि चलखेल सुरु भएको छ ।
उनको भ्रमणपछि नेपाली काँग्रेसले तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई सीमा विवादबारे जानकारी गराएको थियो । कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधी, महामन्त्री डा। शशाङ्क कोइराला लगायतका नेताहरूले सरकारसँग उक्त विवादबारे जानकारी मागेका थिए । ओली सरकारले तत्कालीन समयमा कुनै अध्ययन बिनै सीमा नमिचिएको बताएको थियो । चिनियाँहरूले भवन बनाएको ठाउँभन्दा पर ग्यापुदोचा भन्ने ठाउँको पानी ढलो भएदेखि यता नेपाल उता चीन रहेकोमा उनीहरूले अतिक्रमण गरी भवनहरू बनाउँदा पनि सरकार सीमा मिचिएको होइन भनेर बसेकामा नाम्खा ६ का वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ गुनासो गर्छन् ।